19 April 13-Fante Online
Friday Sermon: True Attributes of Muslims and their Responsibilities - 19th April 2013- Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Ebͻwbira 19, 2013.
(Friday sermon – 19th April, 2013 – Fante Translation)
MUSLIMFO HƆN NOKWAR SU NA HƆN AHYƐDZE.
O! Hom nkorͻfo a hom agye edzi! Hom nsuro Allah dɛ mbrɛ ͻfata dɛ hom suro No; na mma owu mmbͻto hom gyedɛ ber a hom wͻ ahobrase mu (3:103).
Kuran ne nyiyimu yi kyerɛ nokwar gyedzinyi ne gyinabew; nokwar gyedzinyi a ͻhyɛ Taqwa (tseneneeyɛ) ne ahyehyɛdze nyinara mã. Sɛ ahyehyɛdze yi yɛbͻ no tͻfa a, dɛ mbrɛ Kuran Krͻnkrͻn kyerɛ no a, ͻno nye dɛ hɛn adwen bͻkͻ eyiedze a Nyankopͻn wͻ na eyiedze nyinara adasamba wͻ. Dɛ mbrɛ yɛbͻbͻ mbͻdzen ayɛ ndzepa ahorow nyinara, yɛbͻbͻ mbͻdzen ahyɛ Nyankopͻn Ne mbransɛm nyinara mã, dɛ yɛbɛgye Nyankopͻn ͻnye N’akͻnhyɛfo (Nyankopͻn N’asomdwee na Ne nhyira ndwir hͻn do) hͻn nkͻnhyɛ nyinara ato mu na yɛdze akͻ nyɛɛ mu. Dɛ ebɛkan woho dɛ obi a egye dzi no nko nnyɛ wo muslimnyi nnwie. Ɔyɛ adze a ͻkͻ do daadaa dɛ ibedzi Nyankopͻn Ne mbransɛm no do a afa Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no supa no. Nyia a odzi iyinom nyinara do no wobotum afrɛ no gyedzinyi nokwarfo.
Akandzifo a nna wͻwͻ Nyamesom ahorow mu no yɛɛ asobrakyew osiandɛ woenndzi mbransɛm no a wͻdze maa hͻn no do; na sɛ hɛn so yenndzi Taqwa do na yɛyar asobrakyew ma Nyankopͻn Ne mbransɛm na hɛn ahyɛdze a, ͻno hɛn so wͻbɛtsea hɛn na wͻama owu abͻto hɛn wͻ tsebea bi do a ͻbɛyɛ dɛ obi a ͻnntaa ndzeyɛɛpa do. Gyedzinyi nokwarfo wͻdɛ onya Nyamesuro na ͻtaa kyekyɛ hwɛ dza ͻbɛma ͻ’ayɛ setsie ama Nyankopͻn. Ɔnam iyi do ma gyedzinyi nokwarfo ahwer wiadze yi mu egyapadze mpo a mma ommbu no adze bi. Awofo, anyankofo, ebusuafo anaadɛ okun, yer na mba, nwomahufo wͻ Nyamesɛm mu ͻnye hͻn a wͻkeka ho; hͻn mu biara nnyi ho kwan dɛ ͻbɛbra obi dɛ onnyi dɛ ͻka Nyankopͻn Ne mbransɛm do.
Ankorankor biara noara bobu noho nkontaa wͻ Nyankopͻn enyim. Ebusua o! anaaso anyɛnkofo o! sunsum mu akadzi papa no o! Adabrabafo no o! hͻn mu biara nnkɛgye obiara n’adzesoadze asoa. Islam Nokwar mu no nye ebͻdwendwen Nyankopͻn Ne nsɛnkyerɛdze ho, ebɛgye Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no ato mu, ibeyi woho efi ndzeyɛɛ a ͻdze ͻhaw ba na edze Islam no nokwar sunsum mu ntseasee ayɛ som no. Nyankopͻn ada no edzi dɛ hͻn a wonnyi Taqwa no Ɔnngye hͻn Asͻr na Afͻrbͻ nnto mu. Nokwar ͻyɛ kwan a ͻsɛe hͻn. Mbom, Nyankopͻn bɛyɛ Ɔtanfo ma atanfo na Nyanko ma anyɛnkofo ama hͻn a wͻdze Nyankopͻn Ne mbransɛm yɛ edwuma na wͻyɛ ndzeyɛɛ nyinara ma Nyankopͻn enyi gye ho. Biribiara a wͻyɛ ma Nyankopͻn enyi gye ho no, Nyankopͻn hyira do. Hͻn a hͻn tsir ayɛ yie nye Muslimfo no a wͻbͻ hͻnho mbͻdzen dɛ beebiara a owu bͻto hͻn no wͻwͻ tsebea a ͻkyerɛ dɛ wͻyɛ Muslimfo anokwarfo.
Dɛ mbrɛ yeetum agye Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no nokwar etuhoakyɛ ͻsomfo no ato mu no, Ahmadiyyafo so wͻdɛ wͻbͻ hͻnho mbͻdzen yɛ dza Nyankopͻn enyi gye ho na wͻma otsim. Iyi yɛ hɛn ahyɛdze a ͻsõ papaapa ara ma ͻwͻ dɛ yedzi ho dwuma. Hadhrat Khalifatul Masih hwɛe so kaa, dɛ mbrɛ ne nsɛm towee faa no, n’etsiefo a nna ͻrekasa kyerɛ hͻn nye Muslim ebusuakuw nyinara, dɛm ntsi na ͻbͻͻ dzin dɛ nwomahufo anaa banodzifo wͻ Nyamesom mu no. Muslimkuw ne fã kɛse hwɛ MTA (Ahmadiyya Muslim Television) dɛm ntsi hͻn nsa kã Ahmadiyyakuw hͻn nsɛm (dawurbͻ) nyinara.
Hadhrat Khailfatul Masih ne nsa kã nkrataa fi hͻn a wͻnnyɛ Ahmadiyyafo nkyɛn; hͻn a wͻhwɛ MTA anaaso hͻn a woesua Ahmadiyya ho nsɛm. Krataa kor a ne nsa kaã no ͻkyerɛwfo no kyerɛɛ dɛ sɛ otsie Hadhrat Khalifatul Masih ne kasae na ͻhwɛ dza ͻrokͻ do wͻ wiadze a nna ͻnya awerɛhyɛmu dɛ Mirza Ghulam Ahmad yɛ nokwarfo. Ɔmaa hɛn atseyie na mbom onnyi ahoͻdzen a ͻdze bͻgye asetsena mu na Maulwifo no ato mu. Dɛm ntsi wͻbɛfa no dɛ ͻyɛ ohufo na mbom onnkotum abɛka Kuw (Jama’at) no ho. Obi so a ͻnnyɛ Ahmadiyyanyi kaa dɛ, sɛ hɛn kuw yi yɛ nokwar kuw dza, ͻno ͻwͻ dɛ Nyankopͻn No mpͻnse ho suro wͻ dɛ ͻba ho. Hadhrat Khalifatul Masih kaã dɛ dɛm nkorͻfo yi wͻ dɛ wͻkae dɛ Nyankopͻn na ͻhyɛ dɛ wͻnka Taqwa do.
Ampaara, Ahmadiyya Kuw yi yɛ nokwar Kuw; dza osisi wͻ mfe ͻha eduonuanan ntamu yi ara mpo da iyi edzi. Sɛ yɛhwɛ mbrɛ aban horow si bͻ ntoa yɛ hɛn ayɛyɛadze, mbrɛ Maulwifo hͻn Fatwa (mbra) a akenyan nkorͻfo ma wͻyɛ hɛn ewurkadze, wͻfa ndͻmum kumkum hɛn, hyew Ahmadiyyafo hͻn adan, wͻpam hͻn fi edwuma mu, wosiw mbͻdoma kwan ma wonnya nwomasua ho kwan; iyinom nyinara mpo Ahmadiyyafo gyina pintsinn wͻ hͻn gyedzi mu eso wͻayɛ krado dɛ wͻdze hͻnho bͻbͻ afͻr a wͻto no abaw a onnhyia, yinom yɛ nsɛnkyerɛdze a ͻkyerɛ Ahmadiyya no nokwardzi. Sɛ yɛdze iyinom to nkyɛn a, Kuw yi ne kankͻ rokͻ do waawaa a ͻkyerɛ dɛ Nyankopͻn “yɛ Banbͻfo nwanwaso na Ɔboafo nwanwaso bɛn a”.
Ekuwekuw a wͻnam Islam dzin mu atsetsew a wͻdze Jihad ridzi dwuma horow no dze akasakasa hɛn Islam mu ara kɛkɛ. Nyankopͻn si no ewur dɛ Ɔdze kunyimdzi ma hͻn a wͻnam Ne dzin mu dze Jihad dzi dwuma. Hwɛ, ebɛn kunyimdzi na hͻn a wͻtra hͻn ndzeyɛɛ do yi nya? Muslimfo rokumkum Muslimfo. Ɔnam dɛm botae yi ntsi wͻregyegye akodze fi obinom hͻ. Syriaman mu no, ekuwekuw apaapaa hͻn ntamu ridzi ako ma wͻdze aserɛdze to aman a wͻwͻ Anee wiadze afamu dɛ wͻmfa akodze nkͻ hͻn mboa ma wͻntu aban ngu. Muslimfo etuatsewfo na Muslimfo aban no dze dɛm akodze yi rokumkum hͻnho. Ekuw ebien nyinara nnantsew Taqwa kwan mu; dɛm nkorͻfo yi eyi hͻnho tokyen efi Nyamesom mu koraa.
Emir Timur yɛ Muslim ͻhen bi a (1336-1405) ͻsoɛree fii akͻhweabanyɛ mu bɛyɛɛ ͻhen wͻ asaase yɛntamm bi do. Ɔkaa dɛ aber biara a ͻrobotu sa no ͻhwehwɛ hu mu adze yie dɛ Muslimfo ahemfo yɛ hͻn asomfo hͻn eyiedzi ma hͻn anaa wͻnnyɛ; ana hͻn gyedzi si pi anaa ͻnntse dɛm.sɛ ohu dɛ ͻnntse dɛm a otu ahemfo no gu na ͻdze Islam nhyehyɛɛ ba ͻman no mu. Ɔkaa dɛ no kunyimdzi gyina Nyankopͻn No mboa do. Emir Timur ne nhyehyɛɛ pii gyinaa pɛrpɛryɛ do; dɛm ntsi na onyaa kunyimdzi no. Mbom no so, kyerɛɛ etsirmͻdzen; mbom sɛ yɛdze toto ahemfo nkaa no ho dɛm mber no a, ͻno na odzi mu sen hͻn nyinara. Ɔregye ne mberɛwyɛ ato mu no ͻkaa dɛ n’ahendzi kegyinaa ne pɛrpɛryɛ, nyansa na pegyaangyɛedo; na ͻhwɛɛ n’asomfo nkunyim no do, na dɛm ndzeyɛɛ yi sɛ wͻkyɛ siantsir a ͻnam do ma onyaa kunyimdzi mu du a no mu akron na ͻboaa no; na no mu kor pɛr na oduaa akodzi do anaa nhyɛ do.
Hɛn mber do yi, ahemfo wͻ hͻnara hͻn pɛ wͻ hͻn tsir mu na wͻhwɛ hͻn tum a wͻdze si egua do no ara. Asͻrmu banodzifo no so dze hͻnho ahyɛ aperdzi wͻ tum ho na hͻn mu binom atsetsew ewurkadze ekuwekuw anaadɛ wͻyɛ hͻn mboa. Wͻtsetse mbofra wͻ akodzi mu wͻ Nyamesom ntsetseebea (Madrassa) na iyinom nyinara wͻdze ko tsia Muslimfo. Muslimnyi taa Muslimnyi no bogya do. Islam yɛ ͻdͻ na asomdwee som, a ne nkyerɛasee mapa kyerɛ asomdwee na banbͻ na iyi yaw akwa. Mber yi mu nkorͻfo dze som no akɛhyɛ akasakasa mu ara ma sɛ ewurkadze bi si wiadze yi mu a Muslimfo ekuwekuw na wͻdze enyi punpun hͻn.
Ɔtopae totow wͻ USA Boston kurow mu, hͻn a wͻko tsia Islam no kaa no ntsɛmara dɛ Muslimfo na wodzii dɛm dwuma no. Wͻammbͻ kuw biara ne dzin na mbom kaã dɛ kaa bͻͻ mu dzii dɛm dwuma no. Yɛda Nyame ase dɛ dɛm ekuwekuw no pan hͻn se dɛ wonyim ewurkadze yi ho biribi, na dɛm nyiano yi ara mpo yie dodow. Nhwɛ, ͻnam dɛ wͻapow Taqwa ntsi, wͻkͻr do kaã dɛ mbom wͻnnkã nnkua dͻm dwumadzi yi ho naaso wͻbͻ ho nkyidͻm. Ɛbɛn ndzinoa na wonyae fii tu a wotui hyɛɛ hͻn a wonnyi banbͻ do? Yɛhwɛ dɛm ndzeyɛɛ yi n’afã so a wͻka dɛ obiara nndͻ Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) dɛ mbrɛ ehͻn wͻdͻ no na mbom wͻyɛ ndzeyɛɛ a ͻnye dɛm dͻ no bͻ ebira.
Ampaara dɛ obiara a ͻdͻ obi annyɛ yie koraa no ͻfa no supa a ͻda no edzi no kumaabi na Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) kyerɛkyerɛɛ dɛ mma wonndzi obi a onndzi fͻ wͻ biribiara ho, mbofraba, mbasiafo, na hͻn a hͻn enyi efifir dzɛm wͻ ͻkober mu mpo na Kuran da no edzi pefee dɛ, wͻntwetwa nngye hͻn a wͻwͻ nsͻrba nsͻrba bi mu. Dɛm dza worukumkum nkorͻfo wͻ ber a ͻko nsii na wͻrema binom ridzi dzɛm yi ɛ! Dawurbͻ krataa bi kyerɛwee dɛ iyinom nyinara wͻ gyinasi kortsee dɛ wobokumkum Muslimfo nyinara. Binom mmpɛ dɛ wͻbɛkyerɛ hͻn adwen osiandɛ Muslimfo kͻ hͻn mboa.
Wiadze ne Anee afamu ha dze ewurkadze ntaa nnsi ha ma iyi n’akyir yɛtse enyimtwuw, mbom ahohiahia apetse Muslim amanaman pii mu. Bɛyɛ ͻha ne nkyekyɛmu eduosuon na osi wͻ Muslim amanaman mu. Dabiara yɛtse ewudzifosɛm wͻ Muslim man bi mu. Pakistan, Afghanistan, Egypt, Syria, Libya, Algeria, Sudan anaa Somalia Muslimnyi ruku Muslimnyi wͻ beebiara na iyi kͻ do mpo a onnyi dɛ wͻyɛ no wͻ Nyamesom dzin mu na dɛm ewudzi ma basabasayɛ yi nnyi dɛ wͻdze dzin Jihad to do. Muslim amanaman a ewurkadze yaayaw tsim hͻ no asetsena mu pɛrpɛryɛ nnyi hͻ koraa. Ehiafo rokͻ ohia kokobin mu na Adzefo so rokͻ do nya hͻnho mbordo. Akͻhweaban, ekunafo, ngyanka nnya edziban papa nndzi no mpɛn ebien dakor, wͻ Saudi Arabia a ͻnam ngo a wͻwͻ ntsi wͻyɛ ͻdzefo. Sɛ ehwɛ ͻyɛ dɛ Islam dzin mu ntsi wͻmma mbasiafo kwan ma wͻnnyɛ edwuma, mbom aban no so nnhwɛ hͻn eyiedzi. Sɛ wͻdze edziban biara ba a ͻnnso abaatan na hͻn mba. Hwɛ, ahenfie ne bamba noho wͻahyehyɛ sika mfutuw wͻ ho, wͻ ber a amanfo no ruwu kͻm. Woyii no mfonyin wͻ television do kyerɛe. Ahohiahia a ͻtse dɛm wowͻ Muslim aman bi so mu a aban no nnhwɛ ma asetsena mu pɛrpɛryɛ nnkͻ do na ewurkadze rokͻ do ma amanba no nndzi hͻn ahyɛdze do; sɛ wͻma hͻn kwan a iyi so yɛ ewurkadze. Iyinom nyinara yi Taqwa akwa. Wͻkã dɛ Islam nkyerɛkyerɛ esi pi, na ͻyɛ dɛm so, mbom wͻfom ka dɛ ‘ͻyɛadzeyie’ anaadɛ Messiah anaadɛ Nkͻnhyɛnyi yennhia no mprenpire.
Ampaara Nyankopͻn na Ne Nkͻnhyɛnyi (NNN) hyɛɛ nkͻm dɛ dɛm nyimpa no bɛba abɛyɛ wiadze yie. Na dza ͻrokͻ do wͻ wiadze yi rekrantse kã dɛ Muslimfo hͻn werɛefir hͻn nkyerɛkyerɛ. Asͻrdan pii wͻ hͻ naaso wͻayɛ hͻ amanyɛ asoɛe. Ampaara, Kuran wͻ hͻ naaso wͻayɛ no afɛfɛdze na nwomahufo no akyerɛ ne nkyerɛase dɛ mbrɛ obeyie ama hͻnara na wͻtwe nkorͻfo kͻ ͻsɛɛ kwan do. Ɔyɛ mfom dɛ ebɛka dɛ onnhia dɛ obi bɛba osiandɛ Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) kaã dɛ ͻyɛ ehiadze dɛ obi bɛba. Ampaara, ͻyɛ ehiadze dɛ obi fi Nyankopͻn hͻ bɛba abasakyer Muslimfo na wͻaka Islam ho adwenhun no ahyɛ na ͻdze wiadze abahyɛ Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no ne ntamadan no ase.
Aber a Nyankopͻn na Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) too nyia ͻbɛba no dzin dɛ Nkͻnhyɛnyi no, woana na ͻwͻ ho kwan dɛ ͻfa noara ne nkyerɛase na ͻyɛ n’akadofo no ayɛyɛadze? Dza ͻrokͻ do wͻ wiadze yi dzi ho dase dɛ Kuran Krͻnkrͻn a no mudzi tse dɛ mbrɛ n’ahyɛse noara tse no, Muslimfo hͻn Nyamesom, hͻn sunsum mu mudzi na hͻn brapa nyinara atͻ duansuar rohwe ase ma Taqwa reyew. Muslimfo dodowara robͻ bra a ͻnnye Nyankopͻn Ne mbransɛm no nnkͻ do. Wohia nyimpa bi wͻ dɛm tsebea yi mu ma ͻ’atse Islam ase mbrɛ otwa fa na ͻatrɛtrɛ mu wͻ Muslimfo mu na Ahmadiyyafo dɛ nyimpa no Nyankopͻn dze no bae dɛ mbrɛ Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne nkͻnhyɛ no a ͻhyɛɛ no wͻ mfe ͻha ntoatoado duanan (14th century) mu no tse no.
Ɔnam Nyankopͻn N’adom na No mboa do kyerɛkyerɛɛ sunsum mu ahodze a ofi Kuran Krͻnkrͻn no mu wͻ no mbuukuu mu na ͻkyerɛɛ soronko a ͻda nokwar na akͻhwi ntamu. Ɔdaa Islam ne mudzi sen wiadze nsͻrba nsͻrba nyinara na ͻgyee n’atamfo taferɛw banyin mbͻmu. Ɔnam Nyankopͻn ne tsipia na mboa do nyinee kyɛree na owui gyae adzedzi ho nhyehyɛɛ a ͻbɛtsena hͻ afebͻͻ (Khilafat). Sor na asaase mfoaekyir a onyae no kͻ do ara, nam atoyamkyɛm do da edzi. Ana asaasewosow, nsuyirii, Muslimfo hͻnho atseetsee wͻ wiadze nhyɛ mã dɛ obobue Pakistanfo na Muslimfo nkaa no hͻn enyi? Asaasewosow a osii nansa yi wͻtsee nka wͻ amanaman pii mu a Indonesia ka ho. Ohia dɛ wͻdwen Nyankopͻn Ne tumsɛm a oridzi dwuma ho; ohia so dɛ wonya nnuho na wͻyɛ Istaghfar (serɛ bͻnfakyɛ fi Nyankopͻn hͻ). Hͻn a wͻfrɛ hͻnho nwomahufo bͻhunahuna wo dze, ͻwͻ dɛ wͻma wohu hͻn ndabraba a wͻreyɛ. Ana wobotum akyerɛ ndzeyɛɛ kor pɛr wͻ Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) n’abrabͻ mu a ͻnye hͻn nkyerɛkyerɛ yi kͻ do ndɛ ber yi? Dza Muslimfo wͻdɛ wͻyɛ nye wͻdwen hͻn wu ho na wͻyɛ Nyankopͻn N’apɛdze na wͻyɛ dza ͻtsen ma nyimpa.
Anohoba Messiah (ANN) kasae wͻ iyi ho kaa dɛ: Ɔyɛ me pɛ dɛ kwan a Muslimfo rosom wiadze dɛ mbrɛ ͻwͻ dɛ wͻsom Otumfo Nyankopͻn na wͻdze hͻn enyidado, hͻn werɛ na ndzɛmba a ͻfa no wiadze ho no wͻ dɛ wobubu no gͻsͻgͻsͻ. Na wͻdze Otumfo Nyankopͻn Ne kɛseyɛ na No tumdzi ahyɛ hͻn akoma mu na gyedzi dua no bͻsow aba fɛw. Mbom, biribi a ͻtse dɛ dua wͻ hͻ siesieara, eso ͻnnyɛ dua tsen osiandɛ wͻaka afa dua tsen ho dɛ: Ana hom nnhu mbrɛ Nyankopͻn dze asɛm papa yɛ mfatoho. Ɔtse dɛ dua papa, ne ntsin no tsintsim na ne abaw no du sor. Oyi n’aba mber nyinara ͻnam n’Ewuradze tum ntsi…(14:25-26). Allah dze dua papa bi ayɛ kasa ndanenyi bi dɛ ogyina hͻ ma gyedzi a odzi mu na ne ntsin yɛ dzen na n’abaw du sor na ͻnam n’Ewuradze Ne mbransɛm do sow aba mber nyinara. ……ne ntsin no tsinstim…. Kyerɛ dɛ ne gyedzi ho nhyehyɛɛ wͻdɛ ͻyɛ dzen na ͻyɛ nokwar so na ͻnye gyedzi mapa kͻ do a ͻsow aba aber nyinara. Onnyi dɛ ͻyɛ dɛ dua wui. Hwɛ na ka dɛ yɛtse dɛm tsebea yi mu siesiara anaa?
Nkorͻfo pii ka dɛ gyedzi no ho hia nye dɛn? Ɔbɛyɛ dɛn bɛyɛ dɛ ͻyarfo kwasea bɛka dɛ oduyɛfo no ho hia nye dɛn? Sɛ ͻdwen dɛ onnhia oduyɛfo na no ho nnhia no a ebɛn nsunsuado na ne yarba no dze bɛba? Siesiara dze Muslimfo, dɛ mbrɛ ͻtse noara, agye Islam ato mu na mbom wonnyi nokwar gyedzi tsebea mu. Sɛ sunsum mu kandzea nye gyedzi kͻ do a nna odzi mu. Sɛ yetwa no tsia a, dɛm nsɛm yi ho ntsi na m’aba. Dɛm ntsi, mma mmpɛ ntsɛm mmbͻ me sombo dɛ meyɛ ͻtorfo. Mbom, suro Otumfo Nyankopͻn na nu woho osiandɛ hͻn a wonu hͻnho no yɛ enyansafo. Yardͻm ho nsɛnkyerɛdze no yɛ mbusu mapa na Otumfo Nyankopͻn eyi akyerɛ me wͻ ho: ‘….ampaara, Nyankopͻn nsesa nkorͻfo hͻn gyinabew gyedɛ hͻnara sesa dza ͻwͻ hͻn akoma mu no’ (13:12). Iyi nye Otumfo Nyankopͻn N’asɛm na ndom nka nyia ͻkasa tsia Otumfo Nyankopͻn. Otumfo Nyankopͻn aka dɛ Ne pɛ sesa wͻ ber a akoma asesa. Dɛm ntsi suro Otumfo Nyankopͻn na bͻ hu wͻ N’ebufuwhyew ho. Obi nnkotum agye obi n’adzesoadze. Nkorͻfo pii nntum nndzi nokwar wͻ nsɛm a ͻwͻ asɛndzibea ho; dɛm a nna ebɛn su na ehwɛ a wͻbɛkyerɛ wͻ Ndaambankwa a wͻaka afa ho dɛ ‘Da no a obi boguan efi no nua nkyɛn (80:35). Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat Vol.8 Pg. 261-262.
Anohoba Messiah (ANN) ka dɛ: Dɛ mbrɛ obi ka dɛ ͻgye Allah na Nkͻnhyɛnyi dzi naaso sɛ onndzi mbransɛm a wͻaka no do a, biribi tse dɛ asͻryɛ, akͻnkyen, Hajj nye Zakat, Nyamesuro na ahotsewee na obedzi mbransɛm a otum tsew nyinpa ho, na obeyi bͻn akwa na ͻbɛyɛ papa nye dza ͻkeka ho. Sɛ obi annyɛ dɛm a wͻfrɛ no Muslimnyi a ͻnnyɛ yie na yenntum so nka dɛ ͻwͻ tsenenee afadze. Dɛmara so na sɛ obi anngye Anohoba Messiah (ANN) no enndzi a, anaaso woennhu hia a ohia dɛ ͻgye Anohoba Messiah (ANN) no to mu a, nna woennhu Islam no bo a ͻsom, na woennhu Nkͻnhyɛnyi so no bo a ͻsom. Dɛm nyimpa yi so yɛfrɛ no Muslimnyi nokwarfo a ͻnnyɛ yie na wͻannyɛ setsie ama Nyankopͻn na N’asomafo. Dɛ mbrɛ Allah nam Kͻnhyɛnyi do ahyɛ mbra wͻ Kuran mu no, dɛmara so na Khalifa a ͻbɛba wͻ ewie ber no, noho nkͻnhyɛ wͻ Kuran mu. Nkorͻfo a wͻanngye no enndzi na wobetsia no no, wͻafrɛ hͻn etsirmͻdzenfo. Soronko a ͻda Kuran mu nsɛm na Hadith mu nsɛm mu no, (ͻnnyɛ soronko na mbom ͻyɛ asɛm nkyerɛmu a ͻrekyerɛ Kuran nsɛm mu) ͻnye dɛ Kuran abͻ Khalifa no dzin na Hadith so afrɛ dɛm Khalifa kor no ara Anohoba Messiah. Muslimnyi papa bɛn na ͻbɛka dɛ obi a Kuran ahyɛ noho nkͻm na ͻnam do ma ͻmaa nyimpa no mbae ho hia no, onnhia dɛ ͻbɛgye no ato mu (Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat Vol.8 Pg. 261-262).
O! hom nkwaseafo, ebɛnadze na medze hom bͻtoto ho, hom gyinabew tse dɛ nkorͻfo tsibͻnfo bi a, obi ayɛ ture fɛɛfɛw a nduadzewa ahorow pii wͻ mu na esutsen repem ase a ͻbɛn hͻn fie na ndua a owin wͻ ase na ͻyɛmuyiefo yi ato nsa afrɛ hͻn wͻ aber a wͻtse ewia mu na ͻhyew dze hͻn na wonnya owin biara, na wonnyi nduadzewa biara so nndzi na wonnyi nsu a wobͻnom. Na hwɛ dɛ dɛm tsibͻnfo yi apow nsa a ͻyɛmuyiefo yi towee frɛɛ hͻn no. Na ͻnam do na ͻkͻm na nsukͻm ekumkum hͻn. Dɛm ntsi Nyankopͻn reka dɛ Ɔdze nkorͻfo fofor a wͻbɛtsena owin no ase wobedzi nduadzewa no na wͻbͻnom nsu dɛɛdɛw no. Nyankopͻn dze ayɛ mfatoho dɛ Dhul-Qarnain kͻtoo nkorͻfo bi a nna wͻrehyew wͻ ewia mu na dɛm nkorͻfo yi ammpɛ dɛ Dhul-Qarnain bɛboa hͻn, dɛm ntsi wͻkͻͻr ahokyer mu pii. Na Dhul-Qarnain san kͻtoo nkorͻfo bi so a wobisa no mboa tsia hͻn atamfo. Osii ban dze twitwaa gyee hͻn fii atamfo nsa mu.
Meka no wͻ nokwar mu dɛ emi nye dɛm Dhul-Qarnain no a Kuran aka no ho asɛm no a ͻbͻtoo amanaman hͻn mfenhyia ͻha no. na nkorͻfo a wͻrehyew wͻ ewia mu nye Muslimfo no a wͻanngye me annto mu no. Kristianfo no gyinabew tse dɛ obi a ͻtse mprͻtͻͻ mu na ͻmma n’enyiwa do nnhwɛ ewia mpo. Na nkorͻfo a wͻgyee ban maa hͻn nye akadofo a wͻagye me edzi no. Meka no wͻ nokwar mu dɛ woyinom nye nkorͻfo a hͻn gyedzi bɛgye hͻn nkwa efi hͻn atamfo nsa mu no. fapem biara a ͻnnyɛ dzen no, hͻn a wͻyɛ mbataho (Shirk) anaa wͻnngye Nyame nndzi no bɛsɛe no. Mbom, me Kuw yi bɛtsena ase mber tsentsen ana Satan ronntum nndzi hͻn do kunyim na ͻnnkotum afa hͻn ndͻmum. Hͻn nsɛm mpɛnsampɛnsamu nye hͻn adwen na kyerɛ ano bɛyɛ ndam asen nkrantsee na ͻbͻwͻ asen pia na wͻbͻkͻ do edzi kunyim wͻ asͻr nyinara akͻpem atsɛmbuada.
Oho! Hwɛ nkwaseafo no a woenntum annhyɛ me nsew no, hom nhwɛ sum kabii a wͻwͻ mu na woennya enyiwa ennhu nokwar kandzea no. Woenntum ennhu me osiandɛ adwen bͻn afura hͻn enyiwa. Na hͻn akoma awe nkandar na hͻn enyiwa afura. Sɛ nkyɛ wotu anamon dze rokͻhwehwɛ nokwar na wͻtsew hͻn akoma mu efi wontwiwontwi ho a, wͻfa akͻnkyen wͻ adzekyee na wͻyɛ asͻr anafua, su frɛ Nyankopͻn a, nkyɛ Ɔyɛmuyiefo Nyankopͻn no beyi me bͻbew akyerɛ hͻn. Dza ohia nye nkyɛ wobosuro Nyame, Ɔno a Ɔbor ehiadze nyinara do no (Wͻkyerɛɛ ase fii Brahin e Ahmadiyya Part V, Ruhani Khaza’in Vol. 21, pp. 313 – 315).
Anohoba Messiah (ANN) no san kyerɛɛw bio dɛ: O! Adasamba, mma hom mmbu Nyankopͻn enyimtsia nye Ne nsɛnkyerɛdze na hom nsrɛ bͻnfakyɛ wͻ hom bͻn ho mfi Nyankopͻn hͻ, na wͻakyerɛ ahobrase wͻ N’enyim wͻ hͻn bͻn ntsi. Ana hom werɛ efir hͻn a wodzii hom enyim kan a wobuu asomafo no atorfo no dza hͻn ewie yɛɛe. Sɛ hom wͻ suro bi a hom nhwehwɛ sumabew mfi Nyankopͻn hͻ mfi dza hom adwen mu nntsew hom wͻ ho no. hom nsͻr nkorkor na hom nnyi hͻn a wͻyɛ enyitan no akwa na hom ndwen dɛ sɛ nkyɛ etsiafo a woedzi hom enyim kan no ana nsɛnkyerɛdze ammba hͻn nkyɛn? Ana hom nnyɛ famfamfo wͻdɛ hom buu Nyankopͻn enyimtsia? Hwɛ Nyankopͻn Ɔdomfo Nokwarfo No annhyɛ me enyimyam, na Wͻannhyɛ me nokwardzi ma, na Wͻamma me mbasantsen na Wͻannsɛe m’atamfo? Na ͻnam kasa na ndzeyɛɛ do akyerɛ nsɛnkyerɛdze akyerɛ hͻn a wͻwͻ enyiwa a wͻdze hu Nyame Kokroko No a Ɔdze ewia a akyer bosom na bosom so a akyer ewia wͻ Ramadhan bosom kor no mu ayɛ nsɛnkyerɛdze akyerɛ hom.
O! Adasamba me fi Nyankopͻn Otumfo no hͻ na m’aba hom nkyɛn. Ana hom mu bi wͻ hͻ a osuro Ɔsorsor Hen Kokroko No anaa hom botwa mu akͻ wͻ enyimbungudo mu. Hom dze hom apam edur ekyir na hom dze mber tsentsen ayɛ hom nhyehyɛɛ mber tsentsen tse dɛ ͻbͻfo. Ebɛnadze na hom nnyae kwetsir nkogu na ebɛnadze na hom rohwehwɛ a hom nyae kwetsir dɛ hom sɛɛe hom gyedzi. Dɛm ntsi Muslimfo, hom nsuro Nyankopͻn. Ana hom nnhu dɛ mbrɛ Nyankopͻn esi ahyɛ m’asɛm mã na Wͻama me bͻnfakyɛ mbordo.
Ebɛnadze yɛ hom ma hom ntwa hom enyi nhwɛ Nyankopͻn Ne nsɛnkyerɛdze yi? Na hom hyehyɛ me ahoroba yi, ana hom nnhu dɛ dza hom dwenee no ayɛ nkontompo, na hom nsusuii so ayɛ kwa. Mma hom mmbͻ hom tsir mu nka dza onnyi mu wͻ aber a wͻrosͻ hom ahwɛ yi na hom ntow hom tɛgyirama mu. Sɛ hom yɛ atseneneefo a, hom nya nuho dɛ obi a noho abow no na osuro dɛ obenya ewie bͻn. Nyankopͻn dͻ hͻn a wonya nuho (Wͻkyerɛɛ ase fii Hujjatullah, Ruhani Khaza’in Vol. 12, pp. 192 – 193).
Hadhrat Khalifatul Masih bͻͻ mpaa dɛ Nyankopͻn bobuei Muslimfo hͻn akoma mu ama woetum atse Nyankopͻn Ne nhyehyɛɛ ase ama woenya banbͻ efi ͻhaw nye ahomtsew ber a wͻwͻ mu siesieara yi. Ma wohu Ɔdomankoma Ne nsɛnkyerɛdze a ͻyɛ atͻwerɛnkyɛm ama wͻatwe hͻnho efi etsirmͻdzen atseetsee a wͻdze retseetsee hɛn yi. Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn mma yenyɛ atseneneefo na yenyɛ nokwarfo wͻ hɛn kasaa nye hɛn ndzeyɛɛ mu ama yeetum abͻ adasamba kͻkͻ wͻ ͻsɛe kɛse no ho.